Caalamka Online » War la yaab leh: Dowlada Maraykanka oo sheegay in 25 kii ruux ee lagu dilay Baariire ay ahaayeen Cadaw Hubaysan
War la yaab leh: Dowlada Maraykanka oo sheegay in 25 kii ruux ee lagu dilay Baariire ay ahaayeen Cadaw Hubaysan
Maraykanka ayaa sheegay in aan dad rayid ah lagu dilin howlgal laga fuliyay deegaanka Bariire ee Gobalka Shabellaha Hoose kaas oo lagu laayay dad beeralay ah.
War rasmi ah oo ka soo baxay Milatariga Maraykanka ayaa lagu sheegay in dadka howlgalkaa lagu diley ay ahaayeen “Kuwo hubeysan oo cadow ah”.
Warka Ka ay soo saareen Militariga Maraykanka oo ahaa Mid kooban ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada Maraykanka gaar ahaan qeybta Afrika ay qiimayn ku sameeyeen in dad rayid ah la laayay warbixintaan ayaana ciwaan looga dhigay “Qiimeynta Eedeymaha Dad Rayid Ah Oo La Diley 25kii August Oo La Soo Saaray.”
“Kadib qiimeyn iyo baaritaano laga sameeyay howlgalo ay horkacayeen ciidamada Milatariga Soomaaliya iyo eedeymaha la xiriiray in dad rayid ah lagu diley,Taliska Gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan Howlgalada Africa (SOCAF) ayaa waxaa uu ku soo gunaanuday in dadka halkaa lagu diley ay ahaayeen cadow hubeysnaa.” waa sida lagu sheegay qoraalka
Warbixinta oo ah mid xaqiiqda ka fog ayaa lagu sheegay in kahor inta aysan ciidamada gaarka ah ee Maraykanka ee kaiyo saaxiibadood Soomaalida ah ayna si wadajir ah u fulin ay sameeyaan qorshe ballaaran oo loogaga feejignaanayo in dad rayid ah ay howlgaladaa wax ku noqdaan.
Hase yeeshee dadkii lagu diley 25kii August sanadkan deegaanka Bariire xilli aroor hore ayaa baaritaano ay dowlada Soomaaliya sameeyay waxaa lagu sheegay in dadkaas ay ahaayeen dad rayid ah isla markaana ay oggolaatay in dowlada ay ka bixiso magdhow.